Nbudata ngwugwu Howard 250 Trigear FSX & P3D - Rikoooo
Nnukwu ụgbọ elu ndị amịpụtara na njedebe nke Agha Secondwa nke Abụọ, a na-etinye ngwugwu a na ihe eji ebi ndụ abụọ, oke ọkpọkọ zuru oke na ụda ahaziri iche. Ekele Milton Shupe na William Ellis maka imepụta nke a add-on. Ọzọkwa, dakọtara na Prepar3D v4 na v5.
Ijikwa ala dị egwu, injin gburugburu, arụmọrụ ụgbọ elu dị ukwuu; dị nwayọ, na -eme ngwa ngwa, na-amị amị, ma dịkwa ụtọ ịnya ụgbọ elu.
Howard 250 bụ nnoo onye Lodestar mbụ nke nwere igwe ọkọlọtọ, mana ya na fuselage reworịị maka ụlọ nwere ntụsara ahụ na ọnụ ọgụgụ dị nta karịa, n'ozuzu gburugburu 12. Elepụ, Howards na-adị iche na Lodetars site na windo panoramic ogologo nke ụlọ ha na ogologo ha, imi pụtara. Ejiri ihe eji eme ala trigear 250 dị ka iji rụọ nhazi kama ịhazi nhazi taildragger Lodestar. Flightgbọ elu nke mbụ: 1940. Onye nrụpụta: Lockheed
Onye edemede: Site na Milton Shupe na William Ellis, ya na onyinye ndi mbu Tom Falley, Scott Thomas, Ken Mitchell, na ụda site n'aka Nigel Richards. Ihe onyonyo pilot nke Jan Visser dere.
Douglas A-20 nsogbu FSX & P3D 1.0